ကိုယျဝနျကွီးနဲ့ ကိုဗဈရောဂါပိုးကူးစကျခံထားရပွီလို့ ပရိတျသတျကို အသိပေးလာတဲ့ သရုပျဆောငျ နှိုငျးယှဉျမွငျ့မိုရျ – Askstyle
ကိုယျဝနျကွီးနဲ့ ကိုဗဈရောဂါပိုးကူးစကျခံထားရပွီလို့ ပရိတျသတျကို အသိပေးလာတဲ့ သရုပျဆောငျ နှိုငျးယှဉျမွငျ့မိုရျ
ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရပြီလို့ ပရိတ်သတ်ကို အသိပေးလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်
နာမည်ကျော် ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ် ကတော့ ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ ဖေဖော်ဝါရီလ အစပိုင်းက တည်းက လှုပ်ရှားမှုတွေ မှာ ပါဝင်ခဲ့သလို လှူဒါန်းမှုေ တွကိုလည်း တတ်နိုင်သလောက်ပြု လုပ်ပြီး ဖေးမ ကူညီကာ အားလုံးနဲ့အတူ ရပ်တည်နေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ် ဟာ ယခုလက် ရှိအချိန်မှာဒုတိယမြောက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားရတာလည်းဖြစ် ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းေ လာက်ကကိုဗစ်ကူးစက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားရချိန်မှာကိုဗစ်ကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေကလည်း သူမအတွက်စိတ်ပူနေကြသလိုမိသားစုမိတ်ဆွေေ တွကလည်းစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာပါ……။အခုလိုကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံ ထားရပေမယ့် လည်း နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်ဟာ ရောဂါကို အံတုရင် ဆိုင်ရင်းသူမေကျာ်ဖြတ်ခဲ့ပုံလေးကို ပရိသတ်တွေအတွက်မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။
“ဒီရောဂါအကြောင်းကိုယ်တစ်ကိုယ်စာခံစားလို့ရသေလာက် ပြောပြပေးမယ်ရှင့်….ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့မို့ဖြစ်တာသိချင်နေလို့တဲ့…..ကျွန်မ ရောဂါပျောက်ခါနီးမှကိုဗစ်ဖစ်နေတာသိတာ
ကျွန်မလွန်ခဲ့တဲ့ 10 ရက်လော က်ထဲကခါးတွေလက်တွေ ပေါင်တွေ ခြေသလုံးတွေ နာတာနာတာ ဆိုတာ အားလုံးက ကိုယ်ဝန်ဆိပ် တက်နေတာလို့ပဲ ပြောကြတယ်ကျွန်မလ ည်းအဲ့ လိုပဲထင်ခဲ့ တာ ကိုဗစ် ကိုယ်ထဲ ဝင်နေ တာသိတောင် မသိခဲ့ဘူး
အစားအသောက်မပျက်ဘူးလူမမာကြီး လို မနေခဲ့ဘူး ဖြစ်နေမှန်းတော င်မသိခဲ့ဘူးး ညညကျ ရင်တုန်ပီး ချမ်းတက်လာတာကိုလည်းဗို က်ကြီး သည်မို့ မီးယပ်ချမ်း ထတယ် ပဲထင်နေခဲ့တာ
ဘာဆေးမှလည်း မသောက်ခဲ့ဘူး ညညကျရင် ခြေတွေလ က်တွေ ကိုက်တော့ ယောက်က်ျားကို ဆေးလိမ်း ခိုင်းတယ်…နင်းခိုင်း နှိပ်ခိုင်းတယ်….။
လွန်ခဲ့တဲ့4ရက်လော က်က အာခေါင်ေ တွစနာတယ်…နှာခေါင်းပိ တ်တယ်…ကိုယ်နည်းနည်းပူတယ်….အဲ့ဒါလည်း ငါမိုးမိလို့ တုတ်ကွေး ဖစ်တယ်လောက် ပဲသဘော ထားတယ်…. စားစရာရှိတာ ကတော့ အရင်ကထက် ပိုစားတယ်….ပိုအိပ်တယ်….အင်တာ နက်မှာ ဟာသတွေရှာကြည့်တယ်….သရဏဂုံ ရွတ်နေတယ်…ဆရာသ မားတွေ ကလည်း မေတ္တာပို့ေ ပးနေတယ်တဲ့…ပီးတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ 2ရက်က အနံ့စေ ပျာက်တယ်….ဘာရေမွှေးနံ့ ဘာဟင်းနံ့မှမရတော့ဘူးမကြောက်ပါဘူး နှာခေါင်းပိတ်ေ နတယ်ပဲ သဘောထား လိုက်တယ်….အိမ်က လူတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ စိုးရိမ်ကြတာပေါ့ ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ဆိုတော့….တနေ့ ပါရာဒက် 500 အားနဲ့ စီဗစ် မနက်နဲ့ညသောက်တယ်….
အားရှိတာေ တွစားတယ်…အိပ်တယ်….ရေပုံမှန် ချိုးတယ်…ဒီနေ့မနက် အနံ့ပြန်ရပီ…နေလည်းေ ကာင်းတယ်….ခု ယောက်ခမက ကြာဇံဟင်းခါးနဲ့ ရှောက်သီးသုပ်ကျွေးတယ်… ညနေ အိတုံမရဲ့ ဟော့ပေါ့ အကောင်းစား လာပို့ လိမ့်မယ်….စားမယ်…အိပ်မယ်…နားမယ်….အားလုံး စိတ်ချရ မှ အလု ပ်တွေပြန်လုပ်မယ်…. ငါ့ဆီ ဒီရောဂါ ရောက်ကိုရောက်လာနိုင်တယ်ဘာဆေး နဲ့မှ မပျောက် ဘူးသာမာန်ပါရာစီ တမော့နဲ့ ပဲအဓိက အစာအဟာ ရမပြတ်ဖို့နဲ့ စိတ်ဓာ တ်မကျဖို့ကပျောက်မယ့် တစ်ခုတည်းေ သာနည်းလ မ်းပါပဲ အမျိုးတို့
…..” တို့ဆိုပြီးရေး သားမျှဝေလာ ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ အတွက် ပြန်လည်ဖော်ြ ပပေးလိုက်ပါတယ်။
နာမညျကြျော ဇာတျပို့ သရုပျဆောငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ နှိုငျးယှဉျမွငျ့မိုရျ ကတော့ ပွညျသူတှနေဲ့ အတူ ဖဖေျောဝါရီလ အစပိုငျးက တညျးက လှုပျရှားမှုတှေ မှာ ပါဝငျခဲ့သလို လှူဒါနျးမှုေ တှကိုလညျး တတျနိုငျသလောကျပွု လုပျပွီး ဖေးမ ကူညီကာ အားလုံးနဲ့အတူ ရပျတညျနသေူပဲ ဖွဈပါတယျ။နှိုငျးယှဉျမွငျ့မိုရျ ဟာ ယခုလကျ ရှိအခြိနျမှာဒုတိယမွောကျကိုယျဝနျဆောငျထားရတာလညျးဖွဈ ပွီး လှနျခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးေ လာကျကကိုဗဈကူးစကျခံခဲ့ရတယျလို့သိရပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျထားရခြိနျမှာကိုဗဈကူးစကျခံခဲ့ရတဲ့အတှကျပရိသတျတှကေလညျး သူမအတှကျစိတျပူနကွေသလိုမိသားစုမိတျဆှေေ တှကလညျးစိုးရိမျပူပနျနကွေတာပါ……။အခုလိုကိုယျဝနျကွီးနဲ့ ကိုဗဈကူးစကျခံ ထားရပမေယျ့ လညျး နှိုငျးယှဉျမွငျ့မိုရျဟာ ရောဂါကို အံတုရငျ ဆိုငျရငျးသူမကြျောဖွတျခဲ့ပုံလေးကို ပရိသတျတှအေတှကျမြှဝလောခဲ့ပါတယျ။
“ဒီရောဂါအကွောငျးကိုယျတဈကိုယျစာခံစားလို့ရသလောကျ ပွောပွပေးမယျရှငျ့….ကိုယျဝနျကွီးနဲ့မို့ဖွဈတာသိခငျြနလေို့တဲ့…..ကြှနျမ ရောဂါပြောကျခါနီးမှကိုဗဈဖဈနတောသိတာ
ကြှနျမလှနျခဲ့တဲ့ 10 ရကျလော ကျထဲကခါးတှလေကျတှေ ပေါငျတှေ ခွသေလုံးတှေ နာတာနာတာ ဆိုတာ အားလုံးက ကိုယျဝနျဆိပျ တကျနတောလို့ပဲ ပွောကွတယျကြှနျမလ ညျးအဲ့ လိုပဲထငျခဲ့ တာ ကိုဗဈ ကိုယျထဲ ဝငျနေ တာသိတောငျ မသိခဲ့ဘူး
အစားအသောကျမပကျြဘူးလူမမာကွီး လို မနခေဲ့ဘူး ဖွဈနမှေနျးတော ငျမသိခဲ့ဘူးး ညညကြ ရငျတုနျပီး ခမျြးတကျလာတာကိုလညျးဗို ကျကွီး သညျမို့ မီးယပျခမျြး ထတယျ ပဲထငျနခေဲ့တာ
ဘာဆေးမှလညျး မသောကျခဲ့ဘူး ညညကရြငျ ခွတှေလေ ကျတှေ ကိုကျတော့ ယောကျကျြားကို ဆေးလိမျး ခိုငျးတယျ…နငျးခိုငျး နှိပျခိုငျးတယျ….။
လှနျခဲ့တဲ့4ရကျလော ကျက အာခေါငျေ တှစနာတယျ…နှာခေါငျးပိ တျတယျ…ကိုယျနညျးနညျးပူတယျ….အဲ့ဒါလညျး ငါမိုးမိလို့ တုတျကှေး ဖဈတယျလောကျ ပဲသဘော ထားတယျ…. စားစရာရှိတာ ကတော့ အရငျကထကျ ပိုစားတယျ….ပိုအိပျတယျ….အငျတာ နကျမှာ ဟာသတှရှောကွညျ့တယျ….သရဏဂုံ ရှတျနတေယျ…ဆရာသ မားတှေ ကလညျး မတ်ေတာပို့ေ ပးနတေယျတဲ့…ပီးတော့ လှနျခဲ့တဲ့ 2ရကျက အနံ့စေ ပြာကျတယျ….ဘာရမှေေးနံ့ ဘာဟငျးနံ့မှမရတော့ဘူးမကွောကျပါဘူး နှာခေါငျးပိတျေ နတယျပဲ သဘောထား လိုကျတယျ….အိမျက လူတှနေဲ့ သူငယျခငျြးတှကေတော့ စိုးရိမျကွတာပေါ့ ကိုယျဝနျကွီးနဲ့ဆိုတော့….တနေ့ ပါရာဒကျ 500 အားနဲ့ စီဗဈ မနကျနဲ့ညသောကျတယျ….
အားရှိတာေ တှစားတယျ…အိပျတယျ….ရပေုံမှနျ ခြိုးတယျ…ဒီနမေ့နကျ အနံ့ပွနျရပီ…နလေညျးေ ကာငျးတယျ….ခု ယောကျခမက ကွာဇံဟငျးခါးနဲ့ ရှောကျသီးသုပျကြှေးတယျ… ညနေ အိတုံမရဲ့ ဟော့ပေါ့ အကောငျးစား လာပို့ လိမျ့မယျ….စားမယျ…အိပျမယျ…နားမယျ….အားလုံး စိတျခရြ မှ အလု ပျတှပွေနျလုပျမယျ…. ငါ့ဆီ ဒီရောဂါ ရောကျကိုရောကျလာနိုငျတယျဘာဆေး နဲ့မှ မပြောကျ ဘူးသာမာနျပါရာစီ တမော့နဲ့ ပဲအဓိက အစာအဟာ ရမပွတျဖို့နဲ့ စိတျဓာ တျမကဖြို့ကပြောကျမယျ့ တဈခုတညျးေ သာနညျးလ မျးပါပဲ အမြိုးတို့
…..” တို့ဆိုပွီးရေး သားမြှဝလော ခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှေ အတှကျ ပွနျလညျဖျေွာ ပပေးလိုကျပါတယျ။